DISTRIKAN’I MAHABO : Mpianaka nalaina an-keriny, nitaky lelavola 4 tapitrisa Ariary ireo dahalo
Hatramin’ny fiafaran’ny taona 2017 lasa teo iny dia mbola nahenoana fakàna an-keriny tao amin’ny Distrikan’i Mahabo, Faritr’i Menabe. 2 janvier 2018
Vao tsy ela akory anefa no nandrenesana fakana an-keriny ny vadin’ilay Tale tao an-tampon- tanànan’i Malaimbandy raha ny angom-baovao ihany no jerena. Lasa fomba fiadin’ireo dahalo hakana vola, hoy ireo mponina ny fanaovana ity fakana an-keriny ity. Rehefa tsy mahaloa ny lelavola tadiaviny ireo mponina dia tsy maintsy mihatra ny famonoana amin’ny fomba feno habibiana.
Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny mpitandro filaminana àry dia fantatra fa mpianaka nipetraka tao amin’ny Fokontanin’i Bezezika, Kaominin’i Malaimbandy indray no lasibatra tamin’izany, ny alin’ny 28 desambra tokony ho tamin’ny sivy ora alina tany ho any. Jiolahy miisa folo, nitondra basim-borona sy zava-maranitra no tonga nampihorohoro tao amin’ny tokantranon’i Lanto sy ny zanany lahy kely. Vokatry ny tsy fisian’ny volabe notakian’ireo olon-dratsy tamin’io fotoana io dia noentin’izy ireo an-keriny ireto farany. Nanomboka teo no niara-nisalahy nanara-dia ny fokonolona sy ny fianakaviany ka nampandrenesina avy hatrany koa ny tao amin’ny Borigadin’i Malaimbandy hifanampy tamin’izy ireo .
Manjakazaka amin’ny fitakiana volabe ireo dahalo
Noho ny firongatry ny fakana an-keriny ao an-toerana amin’izao fotoana dia hita mibaribary fa milavo lefona ireo mponina. Toa lasa ireo dahalo indray no manjakazaka amin’ny fakana vola be. Raha ny fanampim-panazavana voaray tato ho ato ihany koa aloha no jerena dia voaporofo fa mihalany tamingana sy tsy misy hanga- larina intsony ny omby. Izay no tena antony anaovan’izy ireo ity tranga mampihorohoro ny mponina ity. Porofo mivaingana amin’izany ity zava-nitranga tamin’ny faraparan’ny taoana ity.
Ny 30 desambra lasa teo no nampandre ny Zandary ireo mponina ary nampiverin-dalana fa efa votsotra izy mianaka rehefa nomena efatra hetsy sy iray tapitrisa ariary ireo dahalo. Vola mitentina efatra tapitrisa ariary aza no tena notadiavin’ireo olon-dratsy saingy natao ny fifampiraharahana mba hahavotsotra ireto mpianaka ireto. Salama tsara ireto niharan-doza, hoy ny havany fa na izany aza dia hita ho miaina ao anatin’ny fahoriana ny vahoaka ao amin’ny Faritr’i Menabe. Hatreto aloha dia nilaza ny eo anivon’ny mpitandro filaminana fa mbola eo am-panaovana fikarohana lalina mahakasika ity raharaha ity izy ireo. Izany hoe mitohy hatreto ny fikaroham-baovao momba ireo tompon’antoka mampirongatra izany na dia efa tafaverina aza ireo nalaina an-keriny.
Voatery manaiky ny tsindry hazo lena ataon’ny dahalo ireo mponina
Raha tsiahivina kely aloha dia tsara ho fantatra fa olona miisa efatra eo nandritra ny volana desambra no nalaina an-keriny. Mibaribary avy hatrany izany fa mihamafy orina ny fampahorian’ny malaso ireo mponina. Hita ihany koa fa tratry ny tsindry hazo lena satria manaiky mifampiraharaha amin’ireo olon-dratsy mahakasika ny fankatoavana ny fandoavam-bola. Manaiky tsy fidiny noho ny tahotra sao hovonoina izy ireo, hany ka mitady ireo lelavola be na dia hibabena trosa aza any aoriana. Manoloana izay dia lasa zatra mahazo vola ireo mpandroba ireo ka manjary lasa ataony paikady fangalana vola indray ity fakana an-keriny ity.
Very hevitra izy ireo ankehitriny ary efa miha mitombo isa ny fianakaviana mibaby trosa noho izany. Misy aza ireo olona no lany fananana noho ny fitadiavana vola omena ireo jiolahy ireo. Toa lasa ireo olona mpanakorontana sy mpandrava indray no mahazo laka sy mitady tombontsoa. Misy ireo zandary no tonga manome tsiny ihany satria lasa ireo mponina indray no manazatra ireo dahalo amin’ny fanomezana volabe. Vokatr’izay dia very maina, hoy izy ireo fanarahan-dia. Araka ny fanazavan’ireo mponina anefa dia manahy mafy amin’ny fandatsahan-drà ny an-kabetsahan’ny fianakaviana, hany ka voatery manaiky ny fifampiraharahana sy ny ady varotra amin’ireo mpandrava. Ao anatin’ny fiandrasana vahaolana avy any amin’ny fanjakana izy ireo hatramin’izao.
Tsy mitsahatra mampandre ny mpitondra fanjakana ireo mponina
Hita mibaribary tokoa fa latsaka an-katerena tanteraka ny vahoakan’i Menabe, indrindra fa ny ao amin’ny Distrikan’i Malaimbandy. Efa misesisesy hatrany ny antso fampandrenesana ataon’ireo avy any an-toerana saingy mbola tsy ahitam-bahaolana izany hatreto. Vao mainka aza miha mirongatra sy mihamafy fototra. Ahiana mafy, hoy ireo fokonolona sao misy zandary ambadika ny mahatonga ilay tambajotra tsy mety ho sarona. Izany indrindra no tsy mampitsahatra azy ireo manaitra ny mpitondra fanjakana ankehitriny.
Azo lazaina, hoy ireto farany, fa faritra mena sy iharan’ny tsy fandriam-pahalemana mahery vaika ny Faritra ka ahiana ny mety ho faharavan’ny tanàna raha izao no mitohy tsy misy fiafarany. Marihina fa maromaro ireo miaramila mpampandry tany voatendry miambina ny Faritra saingy tsy antenaina intsony, hoy izy ireo. Miandry ny fidinana ifotony sy ny fandraisan’andraikitra ataon’ny fanjakana ireo vahoaka mijaly amin’izao fotoana izao.